This Pitiful Caption Was Taken from Facebook..if you would like to donate...
Hippies and the Art of Smoking Banana Peels
Anwar: Ex-judge's speech puts Klu Klux Klan to shame
Moooohyiddin's make believe and myths of change
သတင်းစာများပြောတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့ သမိုင်း (၂)
Najib knows nothing about being non-racist
Twenty Seven Seats To Be Scrutnised
“မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ၏တာဝန်မဲ့ရေးသားချက်” မဟတ္တမဂန္ဓီ ကို လုပ်ကြံတာ ဟိန္ဒူလား မွတ်စ်လင်မ်လား အဲဒီလောက်မှ မသိရင်လည်း သတင်းစာထုတ်စားမနေနဲ့တော့
Posted: 13 May 2013 10:01 AM PDT
Peguam itu memberitahu mahkamah bahawa pihak responden sepatutnya memfailkan saman tersebut dalam tempoh tiga tahun mulai Mac 2008 tetapi hanya melakukannya pada 23 November tahun lepas. Mahkamah kemudian memerintahkan responden membayar kos guaman sebanyak RM1,000 kepada kerajaan Selangor dan Khalid.
Pada 12 Disember 2011, kerajaan Selangor dan Khalid memfaikan permohonan untuk membatalkan saman tersebut dan pada 23 Januari lepas, Mahkamah Tinggi menolak permohonan itu dan memutuskan kes itu dibicarakan. -Bernama
Dalam PRU 13, Khalid mengekalkan DUN Pelabuhan Klang apabila menumpaskan calon BN, Nasarruddin M Zin dengan majoriti 2,994. Khalid mengangkat sumpah pertama kali sebagai Menteri Besar pada 13 Mac 2008, empat hari selepas PRU 2008.
Posted: 13 May 2013 05:35 AM PDT
I hope the wakil rakyat will payakind visit to this very sick child.
Maybe the YB can trace the whereabouts of this sad situation via the bank account stated.
Please click for picture enlargement.
May Allah SWT Bless this child of Paradise with less suffering and better medical care..Ameen.
DAP secretary-general Lim Guan Eng has urged former court of appeals judge Mohd Noor Abdullah to prove his claim that the Chinese community tried to "seize political power" from the Malays in the May5general election.
"Can Mohd Noor show proof to back up his accusation?" Lim (left) queried inastatement issued today.
"His remarks on threatening to seize the assets and rights of non-Malays is another massive cover-up of the failure to address corruption by Malays, Chinese and Indians in BN," said the Penang chief minister.
Lim also called into question Mohd Noor's achievements while sitting on the complaints committee of the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC).
"What has he done asamember of the complaints committee of the MACC?" he asked.
Exploiting racial hatred, Lim said, was the easiest way to "hide the failures" of the MACC and the Election Commission (EC) in curbing corruption and money politics.
"Why has Mohd Noor not pressed for action to be taken against Sarawak Chief Minister Abdul Taib Mahmud's (right) refusal to cooperate with MACC, and who attacked MACC as being dishonest and naughty?" he asked.
He challenged Umno to "prove its 1Malaysia credentials" by taking action against Mohd Noor for the latter's statement.
"Should Umno fail to do so, then Umno should not blame MCA or Gerakan for failing to gain non-Malay support, but instead bear full responsibility for the electoral collapse of MCA and Gerakan," Lim added.
Anwar: Ex-judge's speech puts Ku Klux Klan to shame
Voting trend had gone beyond race, MIC tells UiTM
BN leaders: Race-based politics must go
Kit Siang denies calling Najib 'syaitan'
Umno not only racist, it's also corrupt
Umno solely to be blamed for BN's dismal showing
Posted: 13 May 2013 06:46 AM PDT
Dr. Abdullah Badr—an Egyptian Muslim scholar, Al Azhar graduate, and professor of Islamic exegesis, who spent ten years in prison under Mubarak, but, along with any number of Islamic terrorists and agitators, was released under Morsi—recently gave an excellent summation of the second half of the highly divisive Muslim doctrine of wala' wa bara' (or, "Love and Hate")—namely, that the true Muslim should love and help fellow Muslims, while hating and being disgusted by non-Muslims.
Duringaconference last week (see video below, with English subtitles) he explained how he is so "disgusted" by Christians, to the point that, ifaChristian were to touch his cup, he would not drink from it:
[It's] notamatter of piety, but disgust. I get grossed out. Get that? Disgust, I get grossed out man, I cannot stand their smell or … I don't like them, it's my choice. And they gross me out; their smell, their look, everything. I feel disgusted, disgusted. I get disgusted not only by that, but by many things. Continue here for the full article to Raymond Ibrahim's webpage
Posted: 13 May 2013 06:41 AM PDT
Raymond Ibrahim's fundamental new book Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians (Amazon USA), (Amazon UK) , has been widely reported, covered and praised and does not require an introduction, but it promptsareflection.
The problem of Christian discrimination and persecution by Muslims is in fact two problems. Like unpunished crimes' victims who suffer twice, for the crime and for the injustice of the criminal's going scot-free, while the atrocities committed against Christians are unbearable enough on their own, the total indifference of the rest of the world adds to the pain.
Floods, earthquakes, natural calamities and man-induced ones like the recent collapse ofafactory in Bangladesh attract lots of media coverage and offers of foreign aid, but this does not happen with what Raymond Ibrahim has rightly called "arguably the world's greatest humanitarian crisis" and Andrew McCarthy "the great unspoken civil rights issue.. [and] scandal of our day".
How much Western governments care about the plight of the Christians living in Muslim-majority countries can be seen by how indifferent they were to the systematic discrimination of which Pakistani Christians, during that country's 2010 devastating floods, were victims in the distribution of aid – essential to survival – ironically donated by those very same historically Christian Western countries. Continue to Raymond Ibrahim.....
Posted: 13 May 2013 05:30 AM PDT
Shortly after sharing my previous post on How To Whiten Your Teeth With Banana Peel, I came across this very interesting post written by Keith Veronese on Why hippies thought smoking banana peels could get you high.
Posted: 13 May 2013 07:56 AM PDT
Posted: 13 May 2013 05:42 AM PDT
PKR de facto leader Anwar Ibrahim has blastedaformer judge's comments ataforum yesterday for being racist, drawing comparisons with the Klu Klux Klan and Adolf Hitler.
"Former appeal court judge Mohd Noor Abdullah's (left) racist speech puts the Klu Klux Klan to shame and makes Hitler proud.
"How long more are we to tolerate such hate mongering and race baiting from the illegitimate Najib government?" said Anwar inastatement today on his blog.
Yesterday duringaforum organised by UiTM Malaysia Alumni Association and Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung in Kuala Lumpur, Mohd Noor warned the Chinese that there would beabacklash for their "betrayal" of the ruling party at the 13th general election.
"For the Malays, it is taboo to be betrayed, because when they are betrayed, they will react and when they react, their vengeance will be endless," the former judge was reported saying at the forum. Among the points raised during the forum titled 'GE13 post-mortem: Muslim leadership and survival' were the suggested abolition of vernacular schools and how BN can amend the state constitution to prevent non-Malays and non-Muslims from beingamenteri besar in states where the coalition has two-thirds majority. Anwar slammed Umno for sowing "hatred and discord" and said that in contrast, Pakatan Rakyat will continue to foster peace and understanding among various races.
"While Umno sows the seeds of hatred and discord, we in Pakatan Rakyat will shower this nation with goodwill and mutual respect, and in doing so foster peace and understanding in our society. "Let's all stand shoulder to shoulder and remain united. To Malaysians, thank you for coming out tonight (to the Black 505 rally) in Ipoh and showing these zealots what being Anak Malaysia means," he said. From Malaysiakini
Posted: 13 May 2013 05:43 AM PDT
Posted: 13 May 2013 04:27 AM PDT
Posted: 13 May 2013 04:19 AM PDT
Posted: 13 May 2013 03:56 AM PDT
Umno is not racist, claims Najib
Sarajun Hoda: Umno is indeedaracist party. First it is based on one race. Second, it practicesaracist agenda by pointing the keris at others. Thirdly, if it was not racist, they would not have forced its founder Onn Jaafar to leave and formamultiracial party instead. Fourthly, it imposes its racist policies over others including its coalition partners, also mostly racist parties. Fifth, promoting 'ketuanan Melayu', trying to engage PAS in secret talks to advance its racist agenda is yet another proof. Sixth, giving its running dog, Perkasa, complete impunity to vomit what is otherwise Umno's own racist ideology, isaloud and clear sign. The fielding of infamous racist frogs, Ibrahim Ali and Zulkifli Noordin, as Umno candidates in GE13 is the clearest of all. Umno is racist to its core and Najib cannot fool Malaysians by lying and lying, and lying further.
Kokkeong: If it is true that Umno is not racist, then how come the first to come out of your mouth after the election results did not please you wasapatently racist remark? Worse yet, who spewed the nonsense defending Utusan Malaysia's racism? During the election campaign, the only action you displayed when appealing to non-Malays was cash, free meals, or promising to upgrade Chinese schools. There was nothing as far as communicating with non-Malays as equals. You were not interested in what non-Malays think, their heart and soul. You were only interested in buying them off to shut them up. How insulting was that.
Pemerhati: This isatypical lying fork-tongued Umno politician. When it suits him he will talk of the keris and Chinese blood, get his gutter press like Utusan to make false racist accusations against the Chinese and come out with inflammatory statements like 'what more do the Chinese want', get his Perkasa racist goons and other thugs to try and cause racial and religious tension by makingabig issue over the word 'Allah' or get some lackeys to dragacow's head in public. Now this illegal and illegitimate PM whose party has been rejected by the majority of Malaysians pretends to beanice guy by coming out with hypocritical and blatantly false statements like, "Umno is notaracist party because it has always given justice to the people regardless of their race." It is almost certain that investigations will soon reveal that Umno won the elections through fraud. What the majority of Malaysians want to know is how to get rid of these Umno crooks if the investigations indeed do reveal there is massive fraud.
2LAN Slogans and more slogans do not erase the fact that Umno is racist because it owns the most racist newspapers in Malaysia and it sponsors the most racist NGO in Perkasa. Is Umno open to other races? Prime Minister Najib Razak, please grow up and wise up because the public already has.
Xena: Najib, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye?
Chks: Please don't forget that MCA, through The Star, advertised full-page messages such as 'one vote for DAP is one vote for PAS'. So what if we give one vote for PAS? What's wrong with PAS? Is it because their members are Muslim/Malay? Utusan has been sending racist messages on behalf of Umno, The Star has been sending racist messages on behalf of MCA - these are the main reasons for your downfall, Najib. It doesn't takearocket scientist to figure that out. Why is BN so bigoted? Already the election results is an obvious message to all, but they still cannot see it.
Amateur: Najib, start the 'muhasabah' with yourself first. You are still in denial. If Umno is not racist, why must your leaders consistently stress on race, religion and royalty (meaning race is your top priority). Thus, please do not insult our intelligence.
Amalgam: Najib says the most silly things - if Umno is not racist, why support Perkasa and take no action on Ibrahim Ali's racist statements? Pray tell, why field Perkasa vice-president Zulkifli Noordin asacandidate in Shah Alam, and why show the 'Tanda Putera' film behind closed doors and only to Malays? If you claim Umno is not racist, prove this to us - tell former PM Dr Mahathir Mohamad to stop interfering with Umno and stay out of the country's governance.
Zen: As always, the Malays will lose their political as well as economic power by following the scheming policies of racist parties that will eventually weaken them without them even knowing it. So until some of these Malays realise that they have been conned, they will keep losing whatever advantages that they have. The old Malay saying is apt, "Menang sorak kampung tergadai" (You may win at shouting but you lose your village).
Posted: 13 May 2013 05:02 AM PDT
"Dua lagi kriteria ialah peratusan undi pos dan undi awal yang mengatasi margin kemenangan dari undi biasa sehingga keputusan pengundi biasa bertukar akibat pola undi pos dan undi awal diragukan.
"Dan keempat ialah kerusi yang dilaporkan wujudnya penipuan yang ada bukti kukuh beserta laporan polis," kata Rafizi pada sidang media di Ibu Pejabat KEADILAN, hari ini.
"Kita perlu seminggu lagi untuk membina kes. Minggu ini, kami dibantu 67 sukarelawan yang terdiri dari peguam dan akauntan.
"Selain analisa kualitatif dibuat #SiasatPRU13, pasukan ini juga menjalankan analisa kuantitatif untuk mengenalpasti pelbagai perkara.
"Ini menguatkan lagi sentimen rakyat bahawa PRU ke-13 dimenangi Barisan Nasional melalui penipuan," kata Rafizi. -KD
Posted: 13 May 2013 12:46 AM PDT
I don't believe his words and deeds anymore. He is an International Class Lair. Actually he is more dangerous than Ne Win and Than Shwe. But on Myanmar standard he is on par with Khin Nyunt. Khin Nyunt and Thein Sein are Ogres (Be Lews/Monsters) wearing the mask ofasmiling charming prince.
ဝီရသူနဲ့ (၉၆၉)တို့ ရှေ့တန်းက ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အိမ်တွေမီးရှို့ လူတွေသတ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ မျိုးတုန်းရေး သတ်ဖြတ်မူအဖြစ် ကြွေးကျော်လုပ်က်ိုင်လာတယ်။
အစိုးရကလဲသိလျှက်နဲ့ တားဆီးမပေးဘူး။ လုံခြုံရေးရဲတွေကလဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်။
နောက်ဆုံးမနေသာလို့ နိုင်ငံတကာက ဝိုင်းပြောလာတဲ့အချိန် မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အိမ်တွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေ၊ ဗလီတွေ မီးရှို့ဖျက်စီးလို့ကုန်ပြီး လူအတော်များများလဲ သတ်လို့ပြီးမှ ရပ်ကြပါတော့ ဆိုတာလောက်ပဲပြောပြီး၊ စစ်တပ်ကိုဝင်ခိုင်းတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှိပ်ကွပ်မူက ဆက်ပြီးရှိနေဆဲပဲ။ မွတ်စလင်မ် ဒုက္ခသည်တွေကို မြို့ပြင်ထုတ် အရိပ်မရှိ ရေရှားတဲ့လယ်ကွင်းထဲပို့တယ်။ သူတို့ပိုင်တဲ့ ဆိုင်တွေ အိမ်တွေကိုသိမ်းတယ်။
ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီတွေကိုလည်း မွတ်စလင်မ်တွေဆီမရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး တားဆီးထားရုံမက OIC ကိုလည်း ဝင်ခွင့်လုံးဝမပေးခဲ့ပါ။
တဖက်မှာလည်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခကို စတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေ / အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖမ်းဆီးအရေးယူတာမျိုး လုံးဝ မလုပ်ပဲ လုပ်ချင်တာလုပ် လွှတ်ပေးထားခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေကိုတော့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာနဲ့ ချွေးသိပ်ဖြေဖျောက်စေခဲ့တယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ ကူညီထောက်ပံ့ရေးမှာလဲဘဲ မျှမျှတတရှိရဲ့လားပြန်ကြည့်ပါဦး။ ရခိုင်တွေဘက်ကိုတော့ အိမ်တွေဆောက်ပေး၊ ရေနဲ့အစားအသောက်
တွေ ပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ပေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးတွေကအစ လိုလေသေးမရှိ လုပ်ပေထားသလောက် မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ တဲတောင်ထိုးမပေးခဲ့တာ ကမ္ဘာကတောင်အသိပါ။
မိုးရွာရင်အစို၊ နေပူရင်အခြောက်၊ အိတ်ဖို့အခင်းလဲမရှိ ရိက္ခာဆိုရင်လဲ အစားအသောက်မပြောနဲ့ အသက်ဆက်ရှင်ဘို့အရေးကြီးတဲ့ ရေတောင်လုံလောက်အောင်မရကြပါဘူး။
OICနဲ့ န်ိုင်ငံတကာကကူညီမယ် ဆိုပြန်တော့လည်း ပြည်တွင်းရေးမို့ ပြည်တွင်းမှာပဲ နိုင်အောင်ဖြေရှင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပဲ မွတ်စ္စလင်မ်ဒုက္ခသည်တွေကို ပစ်ထားခဲ့တာ ယခုအချိန်ထိ နှစ်ဝက်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
(၉၆၉)အဖွဲ့ကိုလဲ ဖမ်းဆီးအရေးယူမူ လုံးဝမရှိတော့ နိုင်ငံအစိုးရကဘက်လိုက်ပေးနေတာကို သိရှိနေတဲ့အတွက် နှစ်ဝက်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအား စော်ကားပုတ်ခတ်ထားသည့် တရားတွေဟော၊ စာရွက်စာတန်းတွေ စတေကာတွေလိုက်ဝေ၊ လိုက်ကပ်၊ အလုပ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်လာလိုက်တာ တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပါဘဲဗျာ။
မကပ်ရသေးတဲအိမ် မကျန်သလောက်ပါဘဲ။ ရိုးသားပြီး ဘာသာတရားကို တန်ဘိုးထားတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာရေး ဘန်းပြစည်းရုံး (၇၈၆)ကို မဟုတ်မတရားအဓိပ္ပါယ်တွေဖွင်ဆိုရေးသားပြီးအကြမ်းဖက်မူ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့စော်နေခဲ့ကြရာက မကြာပါဘူး 20-4-2013 မှာ မိထ္တီလာအကြမ်းဖက်မှုက ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။
ဒီအကြမ်းဖက်မူကိုနိုင်ငံပိုင် Media တွေ သတင်းဌာနတွေက ရွှေဆိုင်မှာအရောင်းအဝယ် အစဉ်မပြေမှုကစတာလို့ ဘယ်လောက်ကြေငြာပါစေဦးတော့ ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်ပြီးမဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြံစည်လိုက်တယ်ဆိုတာ အထင်အရှားကြီးပါ။
ပြသနာမီးကို စမွေးဘို့ ဝီရသူရဲ့ဆရာရင်း ခင်ညွန့်ရဲ့တပည့်ကို အသုံးချတယ်။ ဖြစ်လဲဖြစ်ရောအကြမ်းဖက်သမားတွေ ချက်ခြင်းရောက်လာပြီး မွတ်စလင်မ်တွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ် အ်ိမ်တွေဗလီတွေမီးရှို့ ဖျက်စီးလိုက်ကြတာ ဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရတော့ဘူး။
မွတ်စလင်မ်တွေလဲမခံနိုင်တော့လို့ ပြန်လဲခုခံရော ဝီရသူက ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ မမှန်သတင်းလွှင့်တင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာသာတွေရဲ့အကူအညီယူလိုက်ပါတယ်၊ အဲ့ဒါကတော့ ကြေးနီတောင်မှာ ရဲတွေမီးရှိ့တာခံထားရတဲ့ သံဃာတပါးရဲ့ပုံကို တင်ပြီး၊ မွတ်စလင်မ်တွေ မီးရှိသတ်တဲ့ဘုန်းကြီးပုံပါဟု ရေးလိုက်တော့ အခြေအနေတွေကပိုဆိုးသွားပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ တိုင်းမူးတယောက်လုံး ကရပ်ကြည့်နေရုံမက ရဲတွေကပါ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို အကူအညီပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားဓါတ်ပုံတွေအများကြီးပါ။ အတိုချုံ့ပြောရရင်တော့ မိထ္ထီလာတမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အိမ်တွေဆိုင်တွေနဲ့ ဗလီတွေလုံးလုံးကုန်မှဘဲ သမ္မတရဲ့ ရပ်ဆိုင်းကြဖို့အမိန့်က ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဒီအမိန့်နဲ့ အတူ တွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဒုတိယမြောက်ချွေးသိတ်စကားကတော့ အခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မူမှာပါဝင်ပါတ်သက်ခဲ့သူတွေကို တိတိကျကျဖေါ်ထုတ်ပြီး ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားပါပဲ။
အမှန်တကယ်အရေးယူတော့မယ် အထင်နဲ့ စောင့်ကြည့် နေစဉ်မှာဘဲ လူ၄၀ဖမ်းထားပြီဆိုတဲ့ သတင်းပေါ်လာလို့ ချီးမွမ်းမယ်ကြံတုန်းရှိသေး ဖမ်းစီးထားတဲ့လူတွေက မွတ်စလင်မ် ၂၀ကျော်ရယ် မွတ်စလင်မ်များကိုကူညီခဲ့သူ ၁၀ယောက်ကျော်ရယ် သံသယရှိသူ ၆ယောက်လောက်ရယ်ပါတဲ့။
ကိုင်းကောင်းကြသေးရဲ့လား။ သေချာတာကတော့ ကလေးငယ် က်ိုမီးရှို့သတ် အိမ်တွေဗလီတွေကိုမီးရှ်ိ့ဖျက်စီးလူတွေများစွာကို သတ်ဖြတ်ပြီး အကြမ်းဖက်လုယက်မှုတွေကျုးလွန်နေတဲ့ ဝီရသူနဲ့(969)အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ ဖမ်းဆီးမခံရဘဲ လွတ်လပ်စွာအပြင်မှာဆက်လက်လုပ်ရှားခွင့်ရှိနေဆဲပါ။ ဘယ်လောက်အထိလွတ်လပ်နေလဲဆိုရင်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကရွာတွေ မြို့တွေကိုလည်း တခုပြီးတခုအတားအဆီးမဲ့စွာဖျက်စီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအစိုးရက်ိုယ်တိုင်ကပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပါပဲ။န်ိုင်ငံတခုလုံးတောင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကသာဖမ်းဆီးချင်ရင်ဒီအဖွဲ့လောက်ကို မိနစ်ပိုင်း နာရီပိုင်းလောက်နဲ့တစ်ယောက်မကျန်ဖမ်းနိုင်ပါတယ်။မဖမ်းချင်လို့တမင်လွှတ်ထားတာပါ။ ဒီထက်ဆိုးတာကတော့(၉၆၉)တို့ဘက်လိုက်ပြီး ( ၉၆၉)ကိုဆန့်ကျင်သူတွေ (၉၆၉)ရဲ့လုပ်ဆောင်မူကိုနောက်ယှက်သူ မှန်သမျှထိရောက်စွာအရေးယူပြီးထောင်ထဲပို့ပေးနေပါတယ်။
ရခိုင်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ထမင်းကျွေးမိလို့ ဖမ်းခံရတာရယ်၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ဆိုင်မှာ လာကပ်ထားတဲ့ (969) စတေကာကို ခွာလိုက်လို့ ထောင် (၃)နှစ်၊ (၂)နှစ် ချခံရတဲ့ သူတွေဟာ ငြင်းမရတဲ့ အထောက်အထားပါ။
အစိုးရကအဲ့ဒီလို ဘက်လိုက် အခွင့်အရေးတွေ ပေးနေတော့ (969)ဟာ ပိုကန်းတက်လာပြီး ရန်ကုန်တိုင်းထဲက ဥက္ကံ၊ မန္တလေးက (၃၅)လမ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဖါးကန့်ဒေသတွေအထိတောင် အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာတာ တွေ့ရတဲ့အခါ အေးချမ်းစွာ နေလိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ ရဟန်းသံဃာအစစ်အမှန်များဟာ (969)ကို ဟန့်တားဖို့ ပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုတင်းမာမူတွေဖြစ်တော့မဲ့အချိန်မှာဘဲ အချိန်ကိုက်ညှိနှိုင်းထားသလို သမ္မတကြီးရဲ့ ချွေးသိပ်စကား (ရခိုင်အရေး ပြောကြားချက်) ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ သိမြင်ကြားကြရသည့်အတိုင်း (လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ ဆိုတဲ့ စကား)နဲ့ပဲ ပြီးနေတာပါ။
လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ပေးလိုက်သည် /အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟူ၍ လုံးဝမတွေ့ရသေးသဖြင့် အရင်အခေါက်များနည်းတူ အခ်ျိန်ဆွဲပေးထားရင်း အကြမ်းဖက် (969)အဖွဲ့များ ဆက်လက်သောင်းကျန်း၊ အကြမ်းဖက်ခွင့် ပေးထားမှာကို အထူးစိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ သမ္မတကြီးကို အထူးပြောလို၊ မေးလို၊ တာလေးတွေရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတခုရဲ့ခေါင်းဆောင်(သမ္မတ)ဆိုတာဟာ နိုင်ငံ့ဖခင်တယောက်လို့ ပြောရင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဖခင် ပီသ လိုရင်တော့ သားသမီးသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူပြည်သားများအပေါ် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမူ၊ ဓလေ့မတူ၊ ကွဲပြားချင်းတွေကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မူမျိုးကို လုံးဝရှောင်ကြင်ရမှာပါ။
အပြစ်ရှိသူကို ချက်ချင်းအရေးယူမူတွေ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်သလို နစ်နာဆုံး ရှုံးသူကိုလည်း ချက်ချင်းပဲလိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေပေးရင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြသနာများ ထပ်မဖြစ်ရအောင် တားဆီးကာကွယ်ရမှာပါ။
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေမှာ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ထိထိ ရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာလုံးဝမတွေ့ရသေးပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မည်သည့်အရေးကိစ္စတွင်မဆို သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပြဌာန်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ဥပဒေများဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူနိုင်ပါလျှက် လူများစွာသတ် အိမ်တွေ၊ ဆိုင်တွေ၊ ဗလီတွေ မီရှို့ဖျက်စီး အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးလုယက်မှုတွေ ကျုးလွန်နေကြတာကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နေပါလျှက်
ဖမ်းဆီး အရေးမယူဘဲလွှတ်ထားလေတော့ အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြတာဟာ အမှားမဟုတ်ပါ။ တိုင်မဲ့သူ မရှိလို့ အရေးယူမရပါဆိုရင်လဲ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရုံပဲရှိပါတော့တယ်။
သင်္ကန်းမြင်ရင်ဘယ် ပြေးရမှန်မသိအောင် ကြောက်နေရတဲ့အနေအထားကြောင့် ဘယ်အစ္စလာမ်ကမှ အသက်နဲ့လဲပြီး တိုင်ရဲမှာမဟုတ်လို့ပါ။ ပြည်တွင်းမှာ မင်းမဲ့စရိုက်တွေကြီး စိုးလွန်းနေပါပြီ။အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များထပ်မဖြစ်အောင် တားဆီးမှုသက်သက်နဲ့တင် ရပ်မထားပဲ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုဖေါ်ထုတ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပြဖို့ အထူးလိုအပ်နေပါပြီ။
အရင်ကလိုပဲလွှတ်ထားဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ထပ်မံဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာတွေကြောင့် ပြည်တွင်းသွေးချောင်းစီးတော့မှာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကတော့ သမ္မတရဲ့စကားကို အလုပ်နဲ့သက်သေပြမှာလား ? အရင်လိုပဲ သံဃာအတုအယောင်(969)တွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံစားနေရအုံးမှာလား? ဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေရဦးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အလင်းမျက်ဝန်းမှတဆင့်အသိပေး လိုက်ရပါသည်။
ပေးပို့သူ » AUNG Chan
Posted: 13 May 2013 12:40 AM PDT
About: An Umno division
State: One of the East Coast States
When: Few days before and after 13th general election
The players: Division head, his deputy, state Umno chief
The division head won the parliamentary seat in 2004. In 2008 general election, he was dropped for poor performance. His deputy replaced him and won the seat in the 12th general election. It soured their relations. Some said the head told his supporters not to vote for his deputy. Could be true, could be not.
When the state gotanew mentri besar in 2008, the division head quickly rubbed shoulder with him, bought him new expensive attires. So, they became good buddies.
Days before nomination for the just concluded general election, the head went to see the mentri besar, asking for the parliamentary seat again.
Felt indebted, the mentri besar fulfilled his request. At the same time, the incumbent Member of Parliament was slotted foraState seat. Fine.
The mentri besar's list was approved and endorsed by the party president who was not aware of the bickering as he was fed byabunch of liars who said everything was perfect with the State Umno. Okay lar, the president is not to be blamed.
So came polling day on May 5.
Fed up with the three of them (the State Umno chief, the division head and his deputy), most of the Umno members in the division voted for Pakatan Rakyat's candidate.
That's how both candidates for the parliament and state seats lost... and they deserved suchapunishment by the electorates.
I don't know about other places but this is the kind of scabs Umno has to deal with. My immediate reaction upon getting the election result from that division on May6was:
Posted: 13 May 2013 12:10 AM PDT
Rafizi's team to probe election results in 27 seats
Hafiz Yatim & Tharshinaa Chandran
1:22PM May 13, 2013
team assembled by PKR director of strategy Rafizi Ramli to probe
alleged electoral fraud has identified 27 parliamentary seats nationwide
for scrutiny, withahigh probability of election petitions being filed
Nineteen of the seats
Posted: 13 May 2013 02:15 AM PDT
Check out THIS LINK here to read about how 500 million was made by arranging three bond sales in the past year.
It isafew days old but still worth reading.
Posted: 12 May 2013 10:16 PM PDT
မှတ်ထားကြပါ၊ မီဒီယာ တို့။ မဟတ္တမ ဂန္ဓီကို သတ်တာ ဟိန္ဒူ။
အစ္စရေး က ရာဘင် ကို သတ်တာ ဂျူး၊ အီဂျစ် က အန်ဝရ်ဆဒတ်
ကို သတ်တာ မွတ်စ်လင်မ်။ အစွန်းရောက်ဆိုတာ ကိုယ့်ထဲမှာ
ဘဲ ရှိတာ။ ဟိုလူ ဒီလူ၊ ဟိုလူမျိုး၊ ဒီလူမျိုး၊ ဟိုဘာသာ၊ ဒီဘာသာ
မဟတ္တမဂန္ဓီ ကို လုပ်ကြံတာ ဟိန္ဒူလား မွတ်စ်လင်မ်လား အဲဒီလောက်မှ
မသိရင်လည်း သတင်းစာထုတ်စားမနေနဲ့တော့။ လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီး
မြွေဆိပ်ပြေဆေးလိမ်ရောင်းစား၊ တွက်ချေကိုက်မယ်။ ဘယ်နှယ် သတင်းစာ
"မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ၏တာဝန်မဲ့ရေးသားချက်" မန္တလေးမြို.စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကထုတ်ဝေတဲ့ ၁၁-၅-၂၁၀၃ ရက်နေ့ထုတ်မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာ နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍမှာမဟတ္တမဂန္ဓီ၏ခြေညှပ်ဖိနပ်နှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များကိုဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် မေ ၂၁ ရက်၌လေလံတင်ရောင်းမည်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမဟတ္တမဂန္ဓီသည်မွတ်စလင်အစွန်းရောက် နာသူရမ်ဂေါ့ဒ်ဆေး၏လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဟုရေးသားထားပါသည်။တကယ်တော့ဂန္ဓီကိုလုပ်ကြံခဲ့သူဟာ ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တဦးကလုပ်ကြံခဲ့တာဆိုတာစာဖတ်ဖူးတဲ့သူ တော်တော်များများသိကြပါတယ်။လူသတ်သမားရဲ.နာမည်ကိုကြည့်ရင်ကို ဟိန္ဒူနာမည်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ဒါကိုမွတ်စလင်အစွန်းရောက်လို့ရေးတာဟာ တာဝန်မဲ့ရာကျပြီး မမှားသင့်တဲ့အမှားတခုကိုရေးသားလိုက်တာပါ။ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုရေးလိုက်တာလဲဆိုတာကိုတော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ ကလောင်နာမည် T.set ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလီမ့်မယ်။ဒီလိုလက်လွတ်စပယ်ရေးသားမှုအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တာဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။လူသတ်သမားဟာ အသက်၃၆ နှစ်အရွယ်ရှိလူမျိုးရေးအယူသီးသမား ပူနားမြို.မှ သတင်းစာအယ်ဒီတာ ဟိန္ဒူအမျိုးသား နာသူးရမ် ဂိုဒ်ဆီ ဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကို ဆရာလင်းယုန်မောင်မောင်ရေးတဲ့ " သွေးစွန်းသောနေ့ရက်များစာအုပ်"နဲ့ တင်ထွေးဘာသာပြန်တဲ့ "ကိုးနာရီ " ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။